Semalt: सामग्री वेग र किन यो विपणकहरूलाई महत्व दिन्छ
Semalt SEO विशेषज्ञहरु तपाइँको सामग्री वेग मापन कुनै पनि वेबसाइट को लागी एक महत्वपूर्ण गतिविधि हो भनेर वर्णन गर्नुहोस्। यो विशेष गरी महत्त्वपूर्ण छ यदि तपाईं आफ्नो रणनीति सुधार गर्न बहुमूल्य र कार्यवाही अंतर्दृष्टि प्राप्त गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। मात्रा भन्दा बढि गुणस्तर जुन SEO को सन्देश हो। तपाइँको वेबसाइट मा १०,००० नराम्रो लेख हुनु भनेको तपाईको पैसामा खर्च हुनेछ कुनै रिटर्न नलगाईकन।
जबकि यो सत्य हो, यो पनि महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईंले आफ्नो प्रतिस्पर्धाको साथ कहाँ उभिनुभयो याद गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। तपाईंको साइटमा high उच्च-गुणवत्ता सामग्री भएको राम्रो छ तर १० उच्च-गुणवत्ता सामग्री हुनु राम्रो हो। यसैले यो राम्रो हो तपाइँको वेबसाइट र तपाइँको प्रतिस्पर्धा को लागी सामग्री को मात्रा को बारे मा जान्न।
उदाहरण को लागी, मानौं तपाईं धेरै उच्च-गुणवत्ता सामग्री प्रत्येक दुई हप्ता मा मासिक मासिक एक पटक बनाउनु भयो। अर्कोतर्फ, तपाइँको प्रतिस्पर्धा, एकै समयमा कम्तिमा दुई उच्च-गुणवत्ता सामग्री सिर्जना गर्दैछ। तुलनामा, अर्को प्रतियोगीले एकै समयमा times गुणा रकम सिर्जना गर्दैछ।
तपाईं कसलाई जीत लाग्छ?
वेबसाइटले सबै भन्दा उच्च-गुणवत्ताको सामग्री जित्छ। र तपाईं जित्न चाहनुहुन्छ, हैन? एसईओ उद्योगको बारेमा एक हास्यास्पद कुरा भनेको चीजलाई खराब चिन्ह लगाउने क्षमता हो। तपाईले प्राय: जसो तपाई अत्यधिक काम गर्नुहुन्छ भनिरहेको सुन्नुहुन्छ, वा तपाईले राम्रो भन्दा बढि नोक्सान पुर्‍याउनु हुन्छ। के उनीहरूले तपाईंलाई भन्न असफल हुन्छन् कि त्यो एसईओको साथ, यदि तपाईं अधिक गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई सही रूपमा गर्न सक्नुहुन्छ भने, तपाईंले आफ्नो वेबसाइटको लागि सम्भव सबै भन्दा राम्रो चीज गर्नुभयो।
तपाईंको वेबसाइटको लागि सकेसम्म उच्च-गुणवत्ता सामग्री भएको आश्चर्यजनक छ। यसले तपाईंको वेबपृष्ठ र समग्र वेबसाइटलाई अधिक कुञ्जी शव्दहरूमा राख्दछ, क्रमबद्ध गर्न, अधिक जानकारी, र अन्य लाभहरूको एक विस्तृत श्रृंखलामा। यसैकारण सामग्री वेग यति महत्त्वपूर्ण छ।
सामग्री वेग के हो?
सामग्री वेग भनेको ब्रान्डले एक विशेष अवधिको अवधिमा प्रकाशन गरिरहेको सामग्रीको मात्रा मात्र मापन गर्दैछ। जब तपाइँ तपाइँको सामग्री वेग एक निश्चित अवधि भित्र तपाइँको प्रतिस्पर्धी को तुलना गर्न चाहानुहुन्छ, तपाइँ केवल मापन गर्नुहुनेछ कति सामग्री सबै पार्टीहरु बाहिर दिइएको अवधिमा राखिन्छ।
तपाईंको सामग्रीको वेग किन फरक पर्दछ?
तपाइँको सामग्री वेग थाहा पाउनुका धेरै फाइदाहरू छन्, तर यो तपाइँले बनाउनु भएको बिन्दुमा निर्भर गर्दछ। यद्यपि यहाँ केहि विश्वव्यापी फाइदाहरु छन्।
तपाईं अधिक स्रोतहरू माग गर्न सक्नुहुन्छ।
यस जानकारीको एक फाइदा भनेको यो छ कि यो अधिक संसाधनहरू पाउनको लागि विकसित गर्न सकिन्छ, सामग्री तपाईंको पाठकहरूले पढ्न सक्ने उत्पादनको लागि। कार्यकारीहरू हार्ने घृणा गर्छन्, तर उनीहरू आफ्नो प्रतिस्पर्धाको अगाडि हुन मन पराउँछन्। जब तपाईं अध्ययन गर्नुहुन्छ, तपाईंको सामग्रीको वेग तपाईंको कार्यकारीहरूलाई प्रमाणित गर्ने उत्तम तरिका हो कि तपाईंलाई राम्रो सामग्री उत्पादन गर्न थप स्रोतहरू चाहिन्छ। जेसुकै भए पनि तपाइँको यसो गर्ने उद्देश्य पकड, ओभरटेक, वा प्रतिस्पर्धा अगाडि रहन जारी गर्नु हो।
तपाइँ तपाइँको प्रतिस्पर्धा को स्रोतहरु निर्धारण गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईंको विभागमा बढी स्रोतहरू मोड्नुको लागि केस बनाउनको विपरित पक्षमा, तपाईं पनि कार्यकारीहरूलाई उनीहरूको प्रतिस्पर्धा कत्तिको राम्रोसँग फ्यान्ड गर्दै हुनुहुन्छ उपयोगी जानकारी दिन सक्नुहुन्छ। यो पत्ता लगाउन गाह्रो छैन किनकि अधिक सामग्रीको अर्थ त्यहाँ केहि चलिरहेको छ, तिनीहरूलाई सुधार गर्दै। र थोरै सामग्रीको अर्थ चीजहरू त्यति राम्रो हुँदैनन् जस्तो उनीहरू पहिले थिए। यसले तपाइँ र तपाइँको कार्यकारी टीमलाई सहयोग पुर्‍याउँछ किनकि उनीहरू सूचनाको महत्वपूर्ण स्रोतको रूपमा सुरू हुन्छ। तपाईले यो निर्धारण पनि गर्न सक्नुहुनेछ कि कम्पनीसँग ठूलो वा सानो टिम छ यदि तिनीहरूले फ्रिल्यान्सरहरू वा दुबैको मिश्रण राख्छन्। यो जानकारी तपाइँको लागि उपयोग गर्न को लागी उपयोगी हुन सक्छ तपाइँ तपाइँको दृष्टिकोण को योजना बनाउँदा।
सामग्रीको लागत अनुमान गर्दै
यो जानकारी प्रयोग गरेर, तपाईं आफ्नो प्रतिस्पर्धीहरूको सामग्री बजेट अनुमान गर्न सक्नुहुनेछ र यसले तपाईंको आंतरिक रूपमा कति खर्च गर्नेछ। यद्यपि यो केवल एक अनुमान मात्र हो, यसले स्पष्ट तस्वीर प्रदान गर्दछ कि तपाईंले खर्च गर्न सक्नुहुनेछ यदि तपाईं सामग्री चलाउन चाहानुहुन्छ कार्यक्रम बनाउने योजना बनाउनुहुन्छ भने।
तपाईंको ब्यापार टीमले त्यसपछि एउटा दृष्टिकोण फेला पार्न सक्दछ जुन तपाईंको बजेटमा काम गर्न मद्दत गर्दछ।
सामग्री वेग कसरी गणना गर्ने
सामग्री वेग गणना गर्दै धेरै साधारण वा धेरै जटिल हुन सक्छ। यसको सरल रूपहरूमा, यो केवल केहि मानक उपकरणहरू प्रयोग गरेर गर्न सकिन्छ जुन प्राय एसईओहरूसँग SEMrush र चिल्लाउने फ्रुगको मनपर्दोबाट पहुँच छ। यस विधिको लागि, यहाँ केहि चरणहरू छन्।
तपाईले गर्न चाहनु भएको पहिलो कुरा भनेको साइटमा अवस्थित ब्लगहरू/लेख पृष्ठहरू प्राप्त गर्नु हो। तपाईलाई चाहानुहुन्छ SEMrush मा जानुहोस्, URL फिल्टर समारोह प्रयोग गरेर ती पृष्ठहरू URL लाई विज्ञापन गर्नुहोस्। एक पटक यो समाप्त भएपछि, तपाईं अन्तिम सूची निर्यात गर्नुहोस्। तपाईंको सामग्रीको वेगको हिसाब गर्नु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ हामीसँग यसलाई व्याख्या गर्न समर्पित सम्पूर्ण लेख छ।
अर्को, तपाइँ ती यूआरएलहरू लिनुहुन्छ र तिनीहरूलाई चिच्याउने फ्र्यागमा राख्नुहुन्छ र अनुकूलन सेटअप सेटअप गर्नुहोस्। यसले यी पृष्ठहरूमा सामग्रीको प्रकाशन मितिहरू बाहिर निकाल्छ। तपाईं त्यसोभए विश्लेषण गर्न सक्नुहुनेछ कि कसरी विभिन्न समयावधिहरूमा साइटको लागि सामग्रीहरू बारम्बार सिर्जना भइरहेको छ।
XPath र RegEx मार्फत प्रकाशन मितिका लागि यहाँ केही लोकप्रिय प्रकारका निकासीहरू छन्:
ब्लग पोस्टिंग स्किमा
जबकि यसले प्रत्येक साइटलाई सम्बोधन गर्दैन, प्रकाशन मितिहरू कसरी ह्यान्डल गरिन्छन् भनेर हेर्न ती साइटहरू नेभिगेट गर्नु त्यति गाह्रो हुँदैन। तपाइँले त्यहाँ बाट कस्टम निकासी सेट अप गर्न सक्नुहुन्छ। एक पटक क्रल URL को माध्यम बाट चलाउन सकिन्छ, तपाईं प्रकाशन मिति को एक सूची छ।
यसले तपाईंलाई केही समयका लागि सिर्जना गरिएको सामग्रीको मात्रा हेर्न मद्दत गर्दछ।
नोट: तपाईं लेखको लेखक को खींच्न को लागी प्रयास गर्नु पर्छ यदि यो प्रक्रियाको बखतमा उपलब्ध छ, हामी पछि यस लेखमा छलफल गर्नेछौं।
तपाईं यो प्रक्रिया दोहोर्याउन सक्नुहुनेछ तपाईंको सबै प्रतिस्पर्धीहरूको वेग वेगको डाटाबेस पाउन र हाल कसलाई हराइरहेको छ र तुलना गर्नुहोस्। अधिक विस्तृत विश्लेषणको लागि तपाई अन्य मेट्रिकमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ, जस्तै शब्द गणना। यससँग, तपाईं प्रत्येक सामग्रीको लम्बाइ र सामग्रीको प्रत्येक पृष्ठमा खर्च गरिएको अनुमानित लागत देख्नुहुनेछ।
तिनीहरूको खर्च प्रतिस्पर्धा गर्न कति खर्च गर्नुपर्दछ भन्ने कुराको सूचक हो। यो गर्नका लागि, तपाईलाई चाहिने चीजहरू कानुनी खुला राख्नु पर्छ एक फ्रीलांसरको अनुमानित लागत पत्ता लगाउनका लागि। त्यो जानकारी र सामग्रीमा शब्दहरूको संख्याको साथ, तपाईं प्रतिस्पर्धा सामग्रीमा खर्च गरेको औसत रकम गणना गर्न सक्नुहुन्छ।
यस तरिकाले, तपाईं आफ्नो प्रतिस्पर्धालाई हराउन सही उपकरणहरूको साथ तयारी गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइँलाई तपाइँको बजेट को लागी सबैभन्दा प्रभावकारी रकम पनि थाहा छ।
यदि तपाईंले प्रक्रिया सही तरिकाले अनुसरण गर्नुभयो भने, तपाईं त्यो निश्चित अवधि भित्र निम्नको रूपमा देखाउन सक्षम हुनुहुनेछ:
नयाँ पृष्ठहरूको संख्या सिर्जना गरियो।
हप्तामा सिर्जना गरिएको पृष्ठहरूको औसत संख्या।
सामग्रीको औसत शब्द गणना
सामग्री उत्पादन लागत
यी प्यारामिटरहरू हुन् जुन तपाईं अनुमान गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ जहाँ तपाईं आफ्नो ग्राहकहरू र बोर्ड सदस्यहरूमा प्रतिस्पर्धाको विरूद्ध खडा हुनुहुन्छ। तपाइँ कसरी तपाइँको सामग्री प्रोग्राम ई संरचित गर्न को लागी आवश्यकता पनी योजना गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाइँ इन्टर्नेट प्रयोगकर्ताको पक्षमा हिड्न खेल्नुहुन्छ। अब तपाईं सावधानीपूर्वक पूर्ण वेबसाइटलाई हराउन वा अन्य वेबसाइटहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न मोल्ड गर्न सक्नुहुन्छ।
जब तपाईं यसलाई एक कदम अगाडी लिन तयार हुनुहुन्छ, तपाईं प्रतिस्पर्धा लेखकहरू र एसईओ टोलीहरू कस्तो देखिन्छन् भन्ने राम्रो अनुमान पाउन सक्नुहुनेछ। सावधानीपूर्वक विश्लेषण गरिएको जानकारीको यी बिटहरूको साथ, तपाईं कसरी अन्य टोलीहरू संरचनाबद्ध छ भनि एक जीवंत प्रोफाइल बनाउन सक्नुहुन्छ।
अर्को मार्ग लिंक्डइनको भ्रमण गर्नु हो र व्यक्तिहरूलाई हातले खोज्नु हो। यसलाई विशेष रेकनको केही रूपको रूपमा सोच्नुहोस्। को सामग्री आउँदछ भनेर हेर्न तिनीहरूका शीर्षकहरूमा "सामग्री," "SEO," "copywriter" खोज्नुहोस्। यससँग, तपाईं अन्य टीमहरू कस्तो देखिन्छन् भन्नेको स्पष्ट तस्वीर पाउनुहुनेछ।
धेरै व्यक्तिहरू सामग्री वेगको बारेमा ख्याल राख्दैनन्। जे होस्, यो ती सानो तर अझै शक्तिशाली उपकरण मध्ये एक हो। सबै जना गुणवत्तायुक्त सामग्री कसरी सिर्जना गर्ने र त्यो गरिरहनुको बारेमा हेरविचार गर्ने बारेमा धेरै चिन्ताित छन्।
धेरै कम वेबसाइटहरू र संगठनहरूले सामग्रीको कुन प्रकारको उनीहरूको प्रतिस्पर्धा साइटमा हो भनेर हेर्न समय लिन्छ र दिइएको समय सीमामा कति सामग्री उत्पादन गरिन्छ। जे होस्, त्यस्ता कम्पनीहरूले त्यस्तो महत्त्वपूर्ण जानकारी प्राप्त गर्ने उपायहरू खोजिरहेका छन्। अन्जानमा, यो सँधै उनीहरूको अनुहारमा घुम्दछ।
सामग्री वेग फिगरिंग समय खपत हुने हो, कुनै श doubt्का छैन, तर यसले आफ्नो आउटपुटमा लगानी गरेको सबै समय र प्रयासको लागि अप्ठ्यारो बनाउँछ। यो प्रदान गर्ने जानकारी यति महत्त्वपूर्ण छ कि यसको लाभहरू तपाईंको कम्पनीमा व्यापक छन्।
सम्पूर्ण प्रक्रियाको बखत, तपाईंले धेरै फरक डाटा पोइन्टहरू लिनुभयो जुन यसमा रहेको सुन प्रदान गर्न क्रमबद्ध गर्न आवश्यक पर्दछ। सामान्यतया, प्रयासको आवश्यकता प्राय तपाईं कत्तिको गहिरो जान चाहनुहुन्छ त्यसमा निर्भर गर्दछ। यो सबै उत्कृष्ट सामग्री सिर्जना गर्ने बारेमा होइन; तपाईंले यी सामग्रीहरू सिर्जना गर्न मात्र प्रयास गर्न सक्नुहुन्न तर प्रतिस्पर्धालाई पार गर्नुहोस्। यसले मद्दत गर्दछ यदि तपाईं आफ्नो प्रतिस्पर्धा जत्तिकै उत्तम सामग्री सिर्जना गर्न प्रयास गर्नुभयो, जुन उनीहरूसँग केही मूलधार ट्राफिक प्राप्त गर्न जित्दै छ। स्थिरताका साथ, तपाईं लामो अवधिमा उनीहरूको अगाडि रहन सक्षम हुनुहुनेछ।